101 Su'aalood… Macaamil, Siyaasad, Kaftan iyo Xidigo | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 16, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan lahaa maanta fasax maanta (Waan u baahday!). Waxaan ka akhriyay baloog kale in dad badani ay raadiyaan "101". Markaa… sidii caadiga ahayd, waxaan tijaabinayaa aragtida si aan u arko jawaabta ay tahay. Waxaan la yaabay sida ay u fududahay in la imaado kuwan, waxyaabo badan oo adduunka ka jira, ganacsiga, iyo waddankan ayaa igu waalaya. Dabcan, laga yaabee inay aniga uun tahay. Xor ayaad u tahay inaad weydiiso su'aalahaaga ama aad uga jawaabto kayga iyada oo loo marayo faallooyinka.
Muxuu Starbucks u sameyn waayey baararka shukulaatada? (Fikradda gabadhayda 12 jirka ah!)
Maxaad ugu baahan tahay ugu badnaan 15 shey oo loogu talagalay Khadka Tooska? Maxaa loo diiday ugu yaraan 1 gaari oo buuxa? Waxaan ahay ninka qarash gareeya lacagta oo dhan!
Maxay salad ugu jirtaa boorsada si dhaqso leh u xumaataa?
Maxay caadi u tahay bangiga inuu qof masaakiin ah ka qaado $ 30 jeeg dulsaaran oo $ 1 ah laakiin iyagu ma siin doonaan kaarka deynta dulsaarka badan?
Maxay bangigu lacagtayda ula bixi karaa isla markiiba jeeg aan qoro laakiin waxay dhigayaan 5 maalmood inay ku hayaan jeeg aan dhigto?
Haddii aan heli karo kaarka SD-ga 2Gb, sidee u dhici kartaa inaadan 500 oo kuwaas ah isu geyn karin oo aadan i siin karin kaarka 1Tb halkii aad ka heli lahayd darawal adag oo leh qaybo guurguura oo fashilmay?
Haddii miyuusigga miyuusiggu uusan hunguri weyneyn, haddaba sidee bay ugu baxaan tanno lacag ah sariirro, bling, dubs, grill, iwm.
Haddii aan dhegeysan karo CD, miyaanay macnaheedu ahayn inaan had iyo jeer awoodi doono inaan duubo?
Maxay supermarketyadu wax walba ugala soo baxayaan khaanadaha oo markaas ay wax walba dib ugu guranayaan jawaano. Miyaanay jirin hab wax ku ool ah?
Maxay tahay sababta ciqaabta dilka sida caadiga ah xabsi daa'in, iyo xabsi daa'in runti waa 20 sano?
Muxuu qof waliba u leeyahay “Kala-bixinta Kaniisadda iyo Dawlad-Goboleedka” iyadoo aan ku jirin Dastuurka ama Baaqa Madax-bannaanida?
Maxaan u bixiyaa khidmadaha iskuulada dawladda ee carruurtayda? Waxaan u maleynayay in aan canshuurta ku bixinay taas.
Maxay wax caadi ah u tahay dowladda inay isku daydo inay beddesho sharciyada u gaarka ah difaaca xorriyadda?
Waa maxay sababta ay 2 xisbi oo waaweyn ugu jiraan Mareykanka?
Maxay daryeelka caafimaad uga jaban dadka aan isticmaalin?
Maxay dharka dumarka uga qiimo jaban yihiin dharka ragga?
Maxaan u dhagaysanaa la taliyayaal aynaan aqoon laakiin mararka qaar ma dhageysano macaamiisheenna ama shaqaalaheenna markay isku wax sheegaan?
Sidee ku dhacday in loo oggolaado siyaasiyiinta inay qoraan xeerarkooda u gaarka ah wixii sax ama qalad ah?
Sidee ku dhacdaa in siyaasiyiintu hawlgab noqdaan intaan millatarigu awood u yeelan?
Sidee baynaan ugu codeyn kororka siyaasiyiinta?
Haddii carruurtaydu ay tahay inay qaataan SATs si ay u galaan kuleejka, sidee bay ku dhici kartaa in siyaasiyiintu aysan imtixaanno u gelin inay xafiiska galaan?
Waa maxay sababta biyaha aan ka soo baxo qasabadda ay u midab-beddelaan saxammadayda, musqulaha iyo barkadaha qubeyska?
Maxay dadku ugu maleynayaan in gawaarida cagaaran ay yihiin jawaabta, markay ku xirxirayaan saldhigyada iyadoo laga helayo tamar laga soo saaray dhuxusha iyo tamarta nukliyeerka?
Waa maxay sababta ay caadi ku tahay in hareeraha saliida lagu haysto afaafka hore ee qof walba Texas, laakiin ma ahan Alaska oo qofna ku noolaan?
Maxaan u haysannaa shariifyo, booliska gobolka iyo booliska magaalada oo isku meel kuwada yaal?
Hadday tani tahay waddan xor ah, maxaa dadka loogu oggolaan waayey inay daroogo isticmaalaan?
Waa maxay sababta khamaarku sharci-darro u yahay mooyee haddii aysan dowladdu bakhtiyaanasiib u qabanin
Muxuu miraha uga qaalisan yahay baradhada baradhada? Heck, waxay ku baxdaa geedaha!
Maxay dawooyinka loo qoro ay u sharciyeysan yihiin iyo daroogooyinka ay sharci darro u yihiin? Dawooyinka waa daroogooyinka.
Muxuu Mareykanku ugu beddeli waayey nidaamka mitirka? Way fududahay in tobaneeyo loo qaybiyo oo lagu dhufto!
Sidee baa Kitaabka Qudduuska ah ugu jirin liiska iibka ugu fiican New York Times?
Muxuu muusikada Masiixiyiinta badankood nuugaa?
Maxay nacnac iyo salool qaali ugu yihiin tiyaatarka? Waxaan badiyaa tagi lahaa hadii aysan aheyn… waxaana macquul ah inaan qarashgareeyo lacag badan.
Maxay dukaamada u leeyihiin khadadka wax lagu iibsado oo badan markay badankood xiran yihiin?
Maxaad uga fileysaa dadku inay wax ka bixiyaan haddii aad marka hore bilaash ku bixinayso? Waxaad ii tababaraysaa qalad!
Maxay Puerto Rico u noqon la’dahay gobol laakiin Alaska iyo Hawaii ay yihiin?
Maxay tahay sababta ay ciidamadeenu u raacayaan qawaaniinta argagixisaduna aysan u raacin?
Maxay carruurtaydu u haystaan ​​fasax badan oo dugsiga ah?
Waa maxay sababta munaasabadaha badan ee iskuulka loo qorsheeyey inta lagu jiro shaqada?
Maxay ururada bulshada ee khaniisiinta ahi u hagaagsanayn?
Muxuu qof waliba ula muuqdaa mid lala yaabo markaan ku idhaahdo waxaan hayaa xanaanayn buuxda oo caruurtayda ah?
Maxay tahay sababta aan ugu baahanahay caymis kala duwan oo loogu talagalay indhaha, jirka iyo ilkaha? Dhammaanteed caafimaad ma aha?
Maxay dadka guryaha leh ay uga qaadaan dulsaarkooda canshuurta laakiin kireystayaasha aysan iska bixin karin kirada? Kireysiga ma caawinayo dhaqaalaha, sidoo kale?
Sidee ayay siyaasiyiintu sidaa ugu taajirsan yihiin?
Muxuu Al Gore u qaadaa diyaarad qaas ah hawlihiisa hadalka ee ku saabsan kululaynta adduunka?
Haddii aan dagaal ku jirno, sidee warshadaha saliidda u sii wadi karaan inay helaan faa'iidooyinka ugu badan? Sicirkaasi miyaanu ahayn mid hoos u dhacaya?
Sideen u joojin karin spam?
Yuu u dirayaa spam-kaas oo aanad macno u samayn karin ereyada midkoodna? Maxay u diraan?
Maxay tahay sababta aan ugu qabanayno militariga heer aad u saraysa iyada oo inta badan militarigu yihiin dad aan awood u lahayn inay galaan kuleejka ama ay ka yimaadeen tarbiyad caqabad ku ah?
Maxaa loo eryi waayey siyaasiyiinta?
Sidee ku dhacday in Indiana u bedesho aagag waqtiyeed oo ay weli u leedahay degmooyin qaar kuwa kale?
Maxaynaan ugu midoobi karin maktabadaha dadweynaha maktabadaha dugsiga sare oo aynaan lacag u badbaadin?
Sidee ku dhacday dambiilayaasha collar cad inay si fudud ku fududaato markay wax xadaan in ka badan dambiilayaasha caadiga ah?
Suuqa saamiyada miyaysan aheyn khamaar?
Maxaan ugu qasbanahay inaan tago baar si aan taariikh u helo? Haween keli ahi miyaanay iska joogin Xuduudaha?
Maxaa diidaya in Starbucks iyo Border ay yeeshaan Habeennada Mudanayaal?
Waa maxay sababta aysan u jirin adeegyo badan oo guri-ilaa-albaab ah? (tusaale ahaan: nadiifinta jirka)
Maxaa diidaya in shandadaha diyaaradaha laga mamnuuco?
Maxay madaxda diinta u istaagi la’dahay markay taageerayaashood caytamaan?
Maxay Faransiisku uga leeyihiin warshado koronto nukliyeer badan kuwa Mareykanka?
Maxaanan ugu rari karin qashinka nukliyeerka meel bannaan?
Waa maxay sababta hemp sharci darro? Way ka dhaqso badan tahay geedaha, way ka xoog badan tahay, mana aha dawo.
Muxuu Tommy Chong u aaday xabsiga waxyaabaha maanka dooriya, laakiin Rush Limbaugh ayaa wali ku jira raadiyaha ka dib markii uu daroogo sharci darro ku sameeyay?
Sidee wax ugu qaali yihiin dukaanka raaxada? Way fiicnaan laheyd haddii aanan wax badan bixin.
Maxaan uga qaylinaa qiimaha gaaska laakiin waxaan ku siineynaa $ 3.50 Grande Mocha Starbucks. (Mmmmmm.)
Waa maxay sababta baabuurtooda kaliya ee kuraasta leh aysan u ahayn? Kaliya waxaan arkaa hal qof oo saaran gaari kasta oo kusocda shaqada.
Maxay saxafiyiinta telefishanku u qurxoon yihiin?
Maxay cayilnaanta u tahay xaalad caafimaad oo keliya Mareykanka?
Maxaad ugu dheereyn kartaa 49 senti oo dheeri ah, laakiin ma awoodi kartid inaad badh cabir sameysid oo aad keydisid 49 senti?
Haddii jimicsigu adiga kuu wanaagsan yahay, sidee ku dhacday ma jirto wado aan ku socdo ama ku kaxeeyo baaskiilkeyga si aan u shaqeeyo?
Maxaad ugu baahan tahay inaad wax doorato waayo, qof, laakiin ma codeyn karo ka dhanka ah qof?
Maxay noogu adag tahay inaan tirino codadka?
Maxaan ugu heli kari waayey Grande Mocha Filimada?
Maxaan feejignaan dheeri ah ugu leenahay waxa ay jilayaashu yiraahdaan marka waxa kaliya ee ay sameynayaan ay iska dhigayaan nolol?
Maxaan u aqriyaa maqaal uu qoray nin shahaado saxaafadeed ka hadlaya oo ka hadlaya teknolojiyadda halkii aan ka aqrin lahaa barta uu ku nool yahay teknolojiyaddu?
Sidee ku dhacay wiilka goor hore soo kaca oo i weydiiya dollar maalin kasta aniga oo shaqada u socda shaqo ma heli karo?
Maxay baararka u siin la’yihiin adeegyo taksi dadka waawayn ee khamriga caba?
Sidee ayaanan dib ugu habeyn karin furayaasha kumbuyuutarka si deg deg wax u qorid wax ku ool ah?
Haddii boodhku dilo kombiyuutarkaaga, sidee ku dhacday in aysan jirin miirayaal la beddelo?
Muxuu nidaamka qalliinka uga jaban yahay barnaamijka xafiiska?
Sidee ku dhacday inay dhisaan madbacad ay ku rakiban yihiin dirawal adag iyo router?
Maxaysan u allifin DVD-yada si ay u socodsiiyaan Qeexid Sare?
Maxay carruurtaydu ugu dhawaaqi kari la’yihiin dugsiga markay xorriyadda diintu tahay xuquuq dastuuri ah?
Maxay dadku u fahmi kari la’yihiin in canshuurta yar ay keeneyso dakhli badan oo canshuur ah?
Maxay shirkadaha diyaaradaha qaarkood kaliya uheysan la’yihiin diyaarado duula marka kuraasta oo dhan ay buuxsamaan halkii ay jadwal ku heli lahaayeen
Maxay qiimaha tikidhada diyaaraduhu qaali u noqdaan maaddaama ay ku sii dhowaanayso waqtiga bixitaanka? Maxaa u jaban?
Sideen ku heli karaa inaan iska diiwaangeliyo bixinta biilka qadka ee meelaha ugu badan, laakiin ma joojin karo khadka tooska ah?
Maxay kuwa taleefannada gacanta sitaa ugu abaalmarin waayaan inta aad macaamiil u ahayd?
Muxuu kumbiyuutarkayga wireless-ka ah iyo jiirka dib loogu soo celin karin?
Waa maxay sababta qof kastaa ugu qasban yahay inuu lahaado caymiska baabuurta? Maxaan u haysan kari waayey sanduuqa caymiska?
Sidee ku dhacdaa markasta oo aan socdo xadka xawaaraha, dadka kale oo dhami way xawaareynayaan… laakiin mar kasta oo aan xawaareynayo, waa lay jiitaa?
Maxay shirkadaha u siin la’yihiin shaqaalahooda amaah iyo amaah?
Sidee ku dhacday in arday badan oo jaamacadda ka soo qalin jabisay aysan waligood ka shaqeynin cilmiga ay shahaadada ku hayaan?
Sidee dadku ku heli karin shahaado ‘waqti loo qabtay’ shaqo ama warshad?
Muxuu PETA u seexiyaa xayawaan badan?
Sidee dadku ugu dagaallamayaan garoon kubbadda cagta laakiin aan loo adeegsan madxaf?
Sidee ku dhacday in madax xun oo ganacsigooda sarreeyo aysan shaqada ka eryin oo dadka ay qasacadaysan ka helaan raali gelin?
Sidee ku dhacdaa markay shirkaduhu weynaadaan, inay gaabis noqdaan?
Sidee ku timid sida internetku u korayo, waa inaan barto luqado badan iyo farsamooyin halkii aan ka yarayn lahaa?
Sidee ku dhacday Yahoo !, Google, Microsoft, Monster, ADP, ama Careerbuilder iima soo bandhigin $ 1 milyan oo doolar Xisaabiyaha Lacagta weli?
[Su'aashaada halkan geli)
Fiiro gaar ah: Fikradda liiskan waxay ka timid ProBlogger wuxuuna galay qoraalkan isaga ah Mashruuca Qoraalka Kooxda ee Liisaska.
aad looga fiirsado….
Agoosto 18, 2006 saacaddu markay ahayd 12:44 PM
Liis fiican - waxaad soo qaadaysaa su'aalo aad u fiican. Miyaad jeclaan laheyd haddii aan amaahno labo ka mid ah jimicsiyadaada 'Cre8tivity'?
14. Maxay tahay sababta kaliya ee 2 xisbi oo waaweyn uga jiraan Mareykanka?
Waan haysannaa iyaga sababtoo ah waxaan leenahay guuleyste qaado dhammaan doorashooyinka. Reer yurubiyanku waxay leeyihiin nidaam asal ahaan ka duwan doorashadooda, oo u xagliya xisbiyo badan iyo isbahaysiga xukuma.
28. Muxuu miraha uga qaalisan yahay jiiska baradhada? Heck, waxay ku baxdaa geedaha!
Inta badan qiimaha miraha cusub waxaa sabab u ah xumaanshaha. Baradhadu waxay ku baxaan dhulka hoostiisa waana raqiis.
36. Waa maxay sababta aan Puerto Rico dawlad u ahayn laakiin Alaska iyo Hawaii ayaa jira?
Dadka Puerto Rico waxay u codeeyaan inaysan noqon Gobol.
37. Maxay tahay sababta ay ciidamadeenu ugu qasban yihiin inay raacaan qawaaniinta, argagixisaduna aysan u hoggaansamin?
Waxaa loogu yeeraa argagixiso si sax ah maxaa yeelay ma raacaan xeerarka dagaalka dhulka.
43. Maxay dadka guryaha leh ay uga qaadaan dulsaarkooda canshuurta laakiin dadka wax kireysta aysan kirada ka qaadi karin? Kireynta ma caawinayso dhaqaalaha, sidoo kale?
Waxaa jira jaritaan kireyste.
45. Muxuu Al Gore u qaadaa diyaarad qaas ah hawlihiisa hadalka ee ku saabsan kululaynta aduunka?
Badanaa waxaa sabab u ah Al Gore inuu yahay munaafaq elitist maalqabeen ah.
49 Maxaan uga dhignaa milatari heer aad u saraysa madaama militariga intiisa badani yihiin dad aan awood u lahayn inay galaan kuleejka ama ay ka yimaadeen barbaarin caqabad ku ah?
Inta badan shaqaalaha militariga waxay ka yimaadaan asalka dabaqadda dhexe.
53 Sidee ku dhacday in dambiilayaasha dharka cad ay ku fududaan markay wax xadaan in ka badan dambiilayaasha caadiga ah?
Markay arintu sidan tahay waxay u badan tahay xaqiiqda A. Waxay leeyihiin garyaqaano ka wanaagsan, oo B. qori ma dhigin qof wejigiisa si uu u helo waxa ay rabeen.
63. Muxuu Tommy Chong u aaday xabsi qalab daroogo, laakiin Rush Limbaugh wali raadiyaha ayuu kujiraa kadib markuu daroogo sharci daro ku sameeyay?
Tommy wuxuu kufsaday Utah. Utah waa gobol aad u adag. Maxay u qalantaa, Salt Lake ayaa laga yaabaa inay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyn Ameerika ee dadku albaabada ka xirtaan habeenkii.
66. Waa maxay sababta aysan gawaaridooda hal kursi u ahayn? Kaliya waxaan arkaa hal qof oo saaran gaari kasta oo kusocda shaqada.
Gawaarida hal kursi waxaa loo yaqaan mootooyin.
70. Hadii jimicsigu adiga kuufiican yahay, sidee ku dhacday ma jirto wado aan ku socdo ama ku kaxeeyo baaskiilkeyga shaqada?
Waxaan raacayaa baaskiilkeyga si aan u shaqeeyo maalin kasta. Haddii ay taasi muhiim kuu tahay inaad lugeyso ama aad baaskiil ku kaxeyso si aad u shaqeyso, markaa ama hel shaqo u dhow gurigaaga ama u soo dhawaaw goobtaada shaqada. Masuuliyad kama saareyso qof kasta oo kale oo adduunka ku nool in la dhiso jid-marooyinka iyo jidadka baaskiillada adiga oo ku habboon.
77. Maxay baararka u siin la’yihiin adeegyo tagaasida dadka khamriga caba?
Qaar badan oo xaqiiqda ah ayaa bixin doona taksi loogu talagalay macaamiisha sakhraansan, sababo la xiriira arrimaha mas'uuliyadda sharciga.
83. Maxay caruurtaydu ugu weyneyn karin inay ku tukadaan dugsiga markay xoriyada diintu tahay xuquuq dastuuri ah?
Sida aan sharciga u fahmay, caruurtaadu waa u xor inay ku tukadaan dugsiga. Si kastaba ha noqotee waa sharci darro in macallinku ku biiro ama ku dhiirrigeliyo inuu sidaas sameeyo.
11. Muxuu qof waliba u dhahayaa â ?? Kala Goynta Kaniisadda iyo Dawladnimadaâ ??? Goorma ayan ku jirin Dastuurka ama Bayaanka Madax-bannaanida?
Kani waa khadka caadiga ah ee ay adeegsadaan ACLU, warbaahinta xorta ahna ma laha dhiirigelin ay kaga hortagto.
19. Sidee ku dhacdaa in siyaasiyiintu hawlgab noqdaan intaan millatarigu awood u yeelan?
Dadka milatariga ah waxay howlgab ka noqon karaan horaantii dhalashadooda 37aad.
20. Sidee baynaan ugu codaynaynin kor u kaca siyaasiyiinta?
Waxaynu leenahay Jamhuuriyad ay ku dhaqmaan xeerar iyo sharciyo ay soo doortaan saraakiil la soo doortay, halkii ay ka ahaan lahayd dimuqraadiyad toos ah, taas oo xeerarka iyo sharciyada lagu sameeyo rabitaanka tooska ah ee dadka.
22. Maxay biyaha aan uga soo baxo tubbada ay u midabeeyaan saxammadayda, musqulaha iyo barkadaha qubeyska?
Adiga iyo adigu waxaan ku noolahay Indianapolis, biyahayaga dhulka hoostiisa ku jira waxaa ku jira tiro aad u tiro badan oo nuuradda ah, taas oo ka tagta wasakhda.
34. Maxay dukaamadu u leeyihiin xariiqyo lacag bixineed oo badan markay badankood xiran yihiin?
Waxay isticmaalaan wadiiqooyinka dheeriga ah waqtiga kirismaska ​​marka dukaamada ay buuxsamayaan dad wax iibsanaya.
38. Maxay caruurtaydu waqti badan ugu qaataan dugsiga?
Marka wiilashu waxay ka caawin karaan pa-kooda howlaha beeraha.
40. Maxay ururada madaniga ah ee khaniisiintu u hagaagsanayn?
Maxay ururada madaniga ah ee tooska ahi u hagaagi la’yihiin ok? Miyaan ku yeelan karaa urur bulsheed hamsterkayga; Waxaan u maleynayaa inuu ku daboolayo qorshahayga caafimaad. Ka warran Mormons-yada hal-xaasyada badan leh miyay la yeelan karaan urur bulsheed dhammaan 14-ka xaas?
41. Muxuu qof waliba ula muuqdaa mid lala yaabo markaan u sheego isaga ama iyada waxaan haystaa xannaaneyn buuxda oo carruurtayda ah?
Waxay u badan tahay inay u muuqdaan kuwo la yaab leh maxaa yeelay ragga ayaa ku dhowaad weligood helin ilaalin buuxda oo carruurtooda ah furiinka Indiana. Xanaaneynta buuxda waxaa la siiyaa oo keliya aabaha marka hooyadu ay sameyso waqti xabsi oo halis ah.
44. Sidee bay siyaasiyiintu sidaa ugu taajirsan yihiin?
Siyaasiyiinta badankood waxay hantiyaan hantidooda kahor intaysan xafiiska imaan. Haddii qofku hodan noqdo inta uu xafiiska joogo, waxay u badan tahay inuu si aan daacadnimo ku jirin u sameeyay. Su’aashaadu waa inay ahaataa â why whyWaa maxay sababta kaliya ee dadka hantida leh loo soo jiito inay u tartamaan xafiiskaâ? Jawaabtu waxay noqon laheyd, maxaa yeelay dadka dabaqadda shaqaaluhu waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay nolol ugu heli lahaayeen si ay xafiiska ugu tartamaan.
46. ​​Haddii aan dagaal ku jirno, sidee bay warshadaha saliidda u sii wadan karaan helitaanka faa'iidooyinka ugu badan? Sicirkaasi miyaanu ahayn wax isdabamarin?
Qiimaha saliida waxaa lagu dejiyaa saadka iyo baahida. Shirkadaha softiweerku sidoo kale waxay sameeyaan faaiido rikoor ah, qiimahaas miyaa la jabinayaa? Qiimaynta qiimayaashu waxay horseedaa yaraanta, kaydinta iyo ka ganacsiga suuqa madow.
50. Maxaa siyaasiyiinta loo eryi waayey?
Waxay noqon karaan, way ku furan karaan doorashada. Doorashadii ka soo noqoshada California, waxay tan u qaadatay heer cusub.
51. Sidee ku dhacday in Indiana u bedesho aagag waqtiyeed oo ay wali u leedahay degmooyin qaar kuwa kale?
Ilaa inta aan ka sheegi karo, Indiana aaga saacad goynta ahi waxay la xidhiidhaa hoosaers liidashada maskax ahaanta. Arrintii oo dhan wax micno ah iima samayn.
54. Miyeysan ahayn khamaarka suuqa saamiyada?
Waxaan u maleynayaa inay tahay khamaar, laakiin xitaa ka gudubka wadada waa khamaaris qaab nooc ah. Waxaan u maleynayaa inay ka duwan tahay ciyaaraha maxaa yeelay kuma xirna madadaalo.
55. Maxay tahay sababta aan ugu aado baar si aan taariikh u helo? Miyaanay jirin dumar keligood ah oo iska taga Xuduudaha?
Waxaan maqlaa dumarka kelidood ah oo isla su'aashaas weydiiya. Waxaan qiyaasayaa in dhibaatada ku haysata ay ka yar tahay inaad ku sameyso halkaad wax ka eegayso, iyo inta aad raadineyso. Waxaan qiyaasi lahaa inaad inta badan la kulanto dumarka kelidood ah xuduudaha laakiin maahan dumarka aad raadineyso.
56. Maxay Starbucks iyo Xuduudaha u yeelan la’yihiin Habeennada Mudanayaashu?
Waxaan u maleynayaa in habeenkii haweenku loola jeedo la'aanta kharashka daboolka haweenka. Maaddaama Starbucks uusan kugu soo dallici doonin inaad soo gasho, ma arko sida tani u adeegsan karto. Dadku waxay aadaan baararka si ay u xirxiraan maxaa yeelay khamrigu wuxuu yareeyaa ka-hortagga bulshada, iyo sababtoo ah qoob-ka-ciyaarku waa nooc ka mid ah riwaayad qariib ah.
57. Waa maxay sababta aysan u jirin adeegyo badan oo albaab-ka-albaab ah? (Tusaale: nadiifin-qallalan)
Indianapolis waxay leedahay adeeg nadiifin ah oo albaab-ka-guri ah. Ma badna ganacsiyadaas maxaa yeelay way ka qaalisan yihiin guud ahaanna kaliya waxay u adeegaan guryaha ku yaal woqooyiga.
60. Maxay Faransiisku uga leeyihiin warshado koronto nukliyeer badan kuwa Mareykanka?
Waxaan aaminsanahay inay jiraan sababo dhowr ah oo tan keena. Midka ugu weyn wuxuu badanaa sabab u yahay la'aanta dhuxusha Faransiiska. Ummadaha horumaray ee adduunka, kaliya Faransiiska iyo Japan ayaa ka maqan dhuxul aad u tiro badan si loo soo saaro koronto. Japan waa wax Atom cabsi badan sababa cad awgood.
61. Maxaynaan ugu rari karin qashinka nukliyeerka meel bannaan?
Gawaarida hawada sare mararka qaarkood waxay qarxiyaan jawiga.
62. Maxay xashiishku sharci darro u yihiin? Way ka dhaqso badan tahay geedaha, way ka xoog badan tahay, oo dawo ma aha.
Ma aanan ogeyn in hemp warshadaha ay sharci darro ahaayeen. Waxaan u muuqdaa inaan xasuusto dharka hemp-ka oo la moodo dhowr sano ka hor, waxaan u maleynayaa in hemp warshadaha oo dhan ay yihiin wax sharci darro ah waa sheeko-magaalo.
64. Sidee wax ugu qaali yihiin dukaanka raaxada? Way fiicnaan laheyd haddii aanan wax badan bixin.
Waxaad bixinaysaa kharashka kugu habboon ee ah in dukaanku u dhow yahay gurigaaga.
65. Maxaan uga qaylinaa qiimaha gaaska laakiin waxaan ku siineynaa $ 3.50 Grande Mocha Starbucks. (Mmmmmm.)
Waxaan u kaxeeyaa baaskiil si aan u shaqeeyo oo aan u cabo biyo. Waxaan u maleynayaa in dadka ay dhibsadeen xaqiiqda ah in qiimaha baatroolku maalin walba qulqulayo oo aysan fahmin sababta.
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo waqti badan oo aan ku akhriyo tan.
26. Maxaa yeelay wax walba lagama heli karo Starbucks. (weli)
50. Sababtoo ah waa aalado aan guban karin.
48. Qolada balooggu!